Mmiri ozuzo ohuru ohuru - WRSP
ỌR NEW ỌH NEWR OF nke mmiri ozuzo
ỌH NEWR OF ỌH OFR OF nke oge ochie mmiri ozuzo
1947 (Mmiri): George Hawtin, ndị ụka Pentikọstal nke Canada pastọ, onye guzobere kọleji ahụ, na onye isi ya, gbara arụkwaghịm na nrụgide sitere na Betel Bible College Saskatoon. Otu onye otu ngalaba ahụ aha ya bụ Percy G. Hunt gbara arụkwaghịm na ọmịiko.
1947 (October 21): Hawtin na Hunt sonyeere Herrick Holt, na ọrụ ọhụrụ, Sharon Orphanage na Schoolslọ Akwụkwọ.
1947 (Late Fall): Hawtin na Hunt, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ, gara Vancouver, British Columbia, nlọghachi nke onye nkwusa ozioma William Branham duziri.
1947-1948 (Oge oyi): Hawtin na ndị ọzọ kwalitere ọchịchị nke ibu ọnụ ogologo oge na nzukọ ekpere na-egosi na mbido Branham na akwụkwọ ahụ, Atomic Power na Chineke site na-ebu ọnụ na-ekpe ekpere, nke Franklin Hall.
1948 (February 11): Otu nwa agbọghọ na-amụrụ akwụkwọ kọrọ amụma banyere ọnụ ụzọ meghere onyinye nke ije ozi na ahụ Kraịst. Revival malitere na kampos, na-ese ndị na-abụghị.
1948 (Ista): Ọrụ puru iche akọwapụtara dị ka oriri nke Pentacost dọtara ọnụ ọgụgụ mmadụ dị ukwuu na kampos.
1948 (July 7-18): Ihe a na-ewere dị ka Nzukọ Nnọkọ Mbido mbụ emere na kampos, na-adọta ndị na-efe ofufe na puku kwuru puku si Western Canada na ebe niile na US Ozizi nke nlọghachị a bịara mara dịka Mmiri ozuzo Ikpeazụ wee gbasaa ebe niile.
1949: General Council of Assemblies of God USA katọrọ nkuzi Latter Rain. Ma ọ dịkarịa ala, otu onye isi ọrụ gbara arụkwaghịm na mkpesa, na esemokwu ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkewa.
1949 (Mbubreyo): Onye ndu nke mmeghari ahụ malitere isite n'aka ndị otu Sharon ka ebe ndị ọzọ mepụtara.
1952: Dika nghazi ahaziri, Mmiri ozuzo Ikpeazu malitere igbanye.
1967: Characteristic Latter Rain ọnọdụ ghọrọ isi ihe nke Charismatic Renewal movement.
Resentbọchị Ugbu a: Nkà Mmụta Okpukpe Ikpeazụ bụ isi nke ọtụtụ mmegharị, dị ka Ubi Ubi Vine, Kansas City Amụma, na mmalite Toronto na Lakeland, yana ọtụtụ narị ụka neo-Pentikọstal nọọrọ onwe ha.
Otutu ndi dere akwukwo edebela mbido mmiri ozuzo nke ikpeazu nke 1940s (mgbe ufodu ana akpo New Order of the Latter Rain iji wepu ihe di iche site na uzo mbu eji okwu a bu mmiri ozuzo ikpeazu) na onodu nke mmeghari ohuru nke ndi Pentikostal. agaba nke oma. Ọtụtụ ndị Pentikọst chere na, mgbe oge Azusa Street gasịrị, Pentikọstism ghọrọ "akọrọ" ma ọ bụ "jụọ oyi" n'ihi na ọ kwụsịrị itinye uche ya na ngosipụta mmụọ, nke mmụọ, na nke obi ụtọ nke Mmụọ Nsọ (Riss 1987: Isi nke 1 na nke 2) ).
Otutu mmeghari na agha mbu agha amalitela inyocha onodu a nke ike kariri ma me ka otu ndi nkwusa "Healing Revival", n'etiti ha bu William Branham, onye bidoro ije ozi ya obere oge (1946). Nke a mere ka ya na ọtụtụ ndị ama ama ama ama dị ka Billy Graham na Oral Roberts. Mana Branham dị obere na mpụga nke isi, na nnukwu itinye uche ya n'ịchụpụ mmụọ ọjọọ, ọgwụgwọ karịrị ike, ibikwasị aka, amụma oge njedebe, yana esemokwu ya na nkuzi nke Atọ n'Ime Otu Dị Nsọ ezighi ezi (Riss 1987: 1-2) , Isi nke 1 na nke 2).
Ka ọ dịgodị, onye ụkọchukwu nke Pentikọstal Assembly nke Canada (PAOC) nke a maara maka "ịnụ ọkụ n'obi a na-achịkwaghị achịkwa," George Hawtin, ghọrọ tinyere aka na esemokwu na Saskatchewan District nke PAOC. Afọ ole na ole tupu mgbe ahụ, Hawtin guzobere Betel Bible College, n'oge ahụ na Saskatoon. Ọ rerela mpaghara kọleji ahụ ka kọleji wee bụrụ ụlọ ọrụ gọọmentị nke mpaghara ahụ. N'oge na-adịghị anya, ọ banyere nsogbu na njikwa mpaghara maka, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-eme mkpebi na-agwaghị ma ọ bụ na-arịọ ikike nke mpaghara ahụ. Enwekwara ajụjụ gbasara ụkpụrụ agụmakwụkwọ mahadum. Na ngwụsị oge opupu ihe ubi nke 1947, Hawtin gbara arụkwaghịm ka achọrọ ma nye. Onye otu ngalaba aha ya bụ Percy G. Hunt gbara arụkwaghịm na ọmịiko (Riss 1987: 53-55; Holdcroft 1980: 2).
Na ọdịda ahụ, Hawtin na Hunt sonyeere Herrick Holt, onye ụkọchukwu nke ụka anọ nke ozioma nke North Battleford, Saskatchewan, na ọrụ ọhụrụ, Sharon Orphanage na ,lọ Akwụkwọ, guzobere kọleji Akwụkwọ Nsọ nke nzukọ ahụ wee bụrụ ntọala nke ngalaba izizi ya. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụmụ akwụkwọ si Betel zigara ụlọ akwụkwọ ọhụrụ (Holdcroft 1980: 3).
N'ihe dị ka n'otu oge ahụ, Hawtin na ndị ọzọ sitere na Sharon mere njem gaa Vancouver, British Columbia, iji gaa mkpọlite ​​nke William Branham duziri. Ihe ndi n’enwe obi uto na obi uto nke nwetakwara ha, ihe ndi n’emere Pentikostism ha chere na ha efuela kemgbe otutu afo. Ha matakwara banyere otu akwụkwọ, Atomic Power na Chineke site na-ebu ọnụ na-ekpe ekpere, site na Franklin Hall, nke tụpụtara na mmadụ nwere ike iru ogo nke nkwukọrịta okwu site na Chineke site na ibu ọnụ ruo ogologo oge (ihe dịka ụbọchị 40) na itinye aka ogologo oge nke ekpere siri ike (Riss 1987: 56-60).
Mgbe otu a laghachiri na North Battleford, ha kwalitere omume omume nke Hall chọrọ ma gbaa ume maka ekpere maka "mmụọ nsọ nke Mmụọ Nsọ" dịka ihe ha hụrụ na Branham revivals Riss 1987: 60-63).
Studentsmụ akwụkwọ nabatara nsogbu ahụ. Na Febụwarị 11, 1948, mgbe ọchịchị nke ibu ọnụ na ikpe ekpere gasịrị, otu n’ime ha, bụ nwa agbọghọ, kọrọ otu amụma metụtara ọnụ ụzọ ghere oghe bụ́ “ọkpụkpọ òkù ka ụmụ akwụkwọ gabiga n’onyinye na ije ozi n’ahụ́ Kraịst.” Revival malitere na kampos, kagbuo klaasị. Ndị nọ n'èzí nụrụ banyere ihe na-eme ma sonye na (Holdcroft 1980: 3).
Mgbasa ahụ gara n'ihu, gụnyere "ihe ịrịba ama na ọrụ ebube" karịrị nke mmadụ. Ndị ndu, na-agbaso ihe atụ Branham, malitere “ịkpọ” ụmụ akwụkwọ n’otu n’otu, bikwasị ha aka n’isi iji weta “ngọzi na mmụọ nsọ” (ihe ndị Pentikọst kwenyere na mgbe niile gụnyere “ịnọ ọdụ,” na-eche ekpere maka Onyenwe anyị) wee na-ebu amụma maka onye ọ bụla (Holdcroft 1980: 3).
Na Easter nke afọ ahụ (1948), ụlọ akwụkwọ ahụ nwere ọrụ pụrụ iche akọwapụtara dị ka mmemme nke Pentikọst. Ihe omume ahụ dọtara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ n'ogige ụlọ akwụkwọ ma duga na nhazi nke ihe a na-ewere dị ka Nzukọ Mgbakọ mbụ, emere na July 7-18, 1948. Maka ihe omume a, ndị bịara ya dị ọtụtụ puku (Riss 1987: 66-68).
Ka ọ dị ugbu a, mmalite ahụ abụrụla ihe ahaziri ahazi, ọ bụkwa nkuzi nke nlọghachị a ka akpọrọ, Rain Rain, okwu a na-eji oge ụfọdụ, opekata mpe kemgbe ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu, iji mata ihe kachasị ịnụ ọkụ n'obi na nke mmetụta uche na-eto eto Nsọ na Pentikọstal (Holdcroft 1980: 1, 4-7).
Ozizi ndi a, bu nke ekwuputara dika amuma oma, na-agbaso usoro ihe omuma ama
Street Azusa na nzukọ William Branham. Ha gụnyere ihe ndị dị ka ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche, ịbụ ndị “e gburu na mmụọ,” ịbụ ndị e mere baptizim n’ime mmụọ, ịgwọ ọrịa karịrị akarị, ịbụ abụ n’asụsụ dị iche iche (“ukwe n’eluigwe”), ibikwasị aka, na ịbịaru nso nke oge ikpeazụ, na ndị ọzọ (Riss 1987: 72-74).
Ozizi ndị a gbasara ngwa ngwa ngwa ngwa, na-ekewa ma ọ bụ na-adọrọ ọtụtụ ụka ụka Pentikọstal guzobere ma bụrụ ndị na-agagharị n'ime ọnwa ole na ole. Ọ bụ ezie na nkuzi mmiri ozuzo nke ikpe azụ bara uru na netwọkụ mmekọrịta ma katọọ ụka (na-ekwu na ọ nweghị ụka ma ọ bụ nzukọ nwere ikike inye ọgbakọ ọ bụla ọzọ ntụzịaka), ndị otu Sharon malitere n'isi mmalite otu "Presbyters" bụ ndị bịara leta ụka Latter Rain ma wee jikwaa ya. ije site na amụma ntụziaka (Riss 1987: 67-74; Holdcroft 1980: 4, Apologetic Index nd: 4).
Ka ọ na-erule etiti afọ 1949, òtù ahụ aghọwo nchegbu dị mkpa maka ndị Pentikọst ndị Ọtọdọks. General Council of The Assemblies of God USA nzukọ na afọ ahụ katọrọ nkuzi Latter Rain dị ka ihe na-ekwekọghị na Akwụkwọ Nsọ (Riss 1987: 103-19).
Ka ọ dịgodị, e hiwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Nke mbu bu ulo akwukwo Elim nke di na New York, bu nke etinyegoro na mgbali ime ka ndi Pentikost nke nwere uche na nke kariri nke puru iche na ndi nwere ego iji merie ndi otu Sharon. Ebe etiti nke abụọ ịrịgo n'ọkwa bụ Bethesda Missionary Temple dị na Detroit, Michigan; ọzọ n'oge na-adịghị anya soro na Texas. Nduzi na njikwa nke mmegharị ahụ na-apụ ngwa ngwa n'aka ndị otu Sharon wee bido iberibe (Riss 1987: 103-10).
Ka ọ na-erule afọ 1952, Mmiri ozuzo Ikpeazụ dị ka òtù a maara aha ya amalitela ịjụ oyi, ọ bụ ezie na ọtụtụ ọgbakọ siri ike na-aga n'ihu n'oge a. Ọzọkwa, ọtụtụ nkuzi nke Mmiri ozuzo ikpeazụ ghọrọ akụkụ bụ isi nke mmegharị mmegharị nke Charismatic nke malitere malite na 1967 (Riss 1987: 140-43).
Ozizi mmiri ozuzo na-ezighi ezi na-etiti ọtụtụ mmegharị nke oge a, dị ka Ubi Ubi, Kansas City Amụma, na Toronto na Lakeland Revivals, yana ọtụtụ narị ụka neo-Pentikọstal nọọrọ onwe ha (Sanchez 2008: 4-6; Houdmann 2002: 2)
Otu ihe dị mkpa nke oge a bụ nkuzi abụọ nke usoro a nwere ike ịlaghachi na William Branham, nkuzi ndị a ka na-ejide ebe niile, n'agbanyeghị na ha esighi na mmalite ndụ nke mmegharị ahụ. Nke mbu bu echiche di ike nke mweghachi nke akparamagwa nke ulo uka mbu na nkwadebe maka oge ogwugwu, tinyere “onyinye ise nke Mo”: ndi amuma, ndi ozi, ndi okenye, ndi nkwusa, na ndi nkuzi (dika edeputara na Paul leta ka ndị Efesọs). Ndị amụma na ndịozi, aghotara, na-ejide ikike n'aka Chineke (Holdcroft 1980: 6-7).
Nke abụọ bụkwa amụma oge ikpe-azụ, na ndị otu kacha raara onwe ha nye ga-abụ “Manmụ Chineke Nke Egosiputara Anya,” na-eme ndị-agha a na-apụghị imeri emeri na ndị na-anaghị anwụ anwụ nke nwere ike imeri ihe mgbochi niile iji mee ka mmadụ niile banye n’ọgbakọ na-ahazi otu ala na njikere maka ala-eze nke Onye-nwe-anyị. Amụma a bụ ihe ndabere maka Joel's Army (ma ọ bụ Ndị Na-emeri), ihe a ma ama nke pụtara ìhè n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Onye nkwusa ozioma Todd Bentley, onye duru ọtụtụ n’ime Lakeland Revival, bụ onye ama ama n’agha (Warnock 1951: 83; Sanchez 2002: 5-6).
Ọ bụ ezie na enwekwaghị ọrụ na-arụsi ọrụ ike nke dị na North Battleford, nlọghachị ahụ n'onwe ha, ugbu a mara mma landscaped na ọtụtụ ụlọ ọrụ, ka na-arụ ọrụ, ọ bụ ezie n'ụzọ dị ukwuu dị ka ogbako center. Ọ dịkarịa ala nzukọ okpukpe abụọ, gụnyere "Oriri nke Pentikọst" na ogige ezumike, na-eme kwa afọ, na enwekwara ọrụ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ ebe ahụ (Holdcroft 1987: 7).
Ozizi na nkwenkwe nke usoro ịmegharị okpukpe nke Mmiri ozuzo ikpeazụ siri ike ịkọwa ebe ọ bụ na ha niile bụ ihe na-ebugharị ebumnuche, ma ọ dịbeghị mgbe edepụtara ha.
Thetù a bụ ngagharị iwe megide Pentikọstism a haziri ahazi n'oge ahụ, karịsịa ihe ọtụtụ ndị weere dị ka ụka ụka "akọrọ", na-enweghị ndụ mmụọ na nke ime mmụọ (Holdcroft 1980: 2). Ọzọkwa, ọ bụ mmegharị nke na-emetụta ihe ùgwù dị omimi na nke dị mkpa (amụma, ahụmịhe, nghọta, na ntuziaka kwụ ọtọ site na Chineke) maka ntụgharị okwu nke ederede. Amụma ndị a na ntụzịaka a gbanwere site n’oge ruo n’oge. Ọzọkwa, mgbe mmegharị ahụ jiri Akwụkwọ Nsọ mee ya, ọ mere nke a n'ụzọ doro anya, nkọwa na nkọwa ederede (ya bụ, na-ele Akwụkwọ Nsọ Hibru iji kọwaa Agba Ọhụrụ) (Holdcroft 1980: 2-7; Houdmann 2002: 1).
N'agbanyeghị nke ahụ dị n'elu, ọ ga-ekwe omume ịmata ọtụtụ nkuzi ma ọ bụ nkwenkwe, ọ bụ ezie na ndị isi nke otu a ga-eguzogide nsonaazụ ụlọ ọrụ nke ịkpọ ha nkuzi.
N'ezie, nke kachasị, bụ nnabata echiche nke A Mmiri Ikpeazụ dị ka a hụrụ n'Akwụkwọ Nsọ Hibru n'akwụkwọ Deuterọnọmi (11:14), Joel (2:23) na Zekaraịa (10: 1). Akụkụ ndị a na-akọwa mmiri ozuzo mmalite iji malite ihe ọkụkụ na mmiri ozuzo ikpeazụ iji mee ka ọ tozuo maka owuwe ihe ubi. Ndị na-esochi Mmiri ozuzo na-ahụ nlọghachi ha dịka ihe akaebe doro anya na oge njedebe dị nso (Theopedia nd: 1).
Mmiri ozuzo ikpeazụ ahụ hụrụ okwu ahụ bụ "Mmiri ozuzo Ikpeazụ" dị ka ihe atụ nke oge mweghachi nke ụka ụka mmeri, nke ụwa niile, gụnyere onyinye ndị ozi oge niile, na njedebe oge, dị iche na nke dour, enweghị nchekwube, Calvinistic dispensationalism ọtụtụ ebe na Pentikọstism nke oge ahụ. Ebe ndi nwughari ohuru nke oge a kwusiri ike banyere ogwugwo na ndi Pentikost mbu mesiri asusu ike, Mmiri ozuzo kwusiri ike amuma (Riss 1987: 116).
Onyinye ndị ozi ahụ a ga-eweghachiri gụnyere ịsụ asụsụ dị iche iche, ịgwọ ọrịa, ngọzi mmụọ, amụma na ije ozi ugboro ise, gụnyere ndị amụma, ndịozi, ndị nkwusa ozioma, ndị nkwusa na ndị nkuzi. Ọrụ nke ndị amụma na ndịozi, ndị ụka lara n'iyi na Middle Ages, ga-eweghachi ugbu a iji nye ndị isi ụka nke mmeri, na-akwadebe ụwa maka nloghachi nke Jizọs Kraịst. N’ikwe n’ụzọ ọzọ, Mmiri ozuzo Ikpeazụ ga-emecha ọrụ Chineke n’ụwa, ya na ụka wee jikọọ ọnụ ma merie ụwa niile, ma weta Alaeze Chineke. Thetù ahụ kwenyere na a pụrụ ịnata onyinye nke mmụọ (gụnyere ọgwụgwọ) site na ibikwasị aka n'aka onye kwere ekwe gaa na nke ọzọ, n'ụzọ dị iche na nkwenkwe Pentikọstal ọdịnala na "ịnwụrụ" (iji ekpere na-echere ọnụnọ Chineke) (Theopedia nd: 1; Houdmann 2002: 1-2).
Otutu nkuzi ndi ozo soro site na nkwenkwe ndi a, ma akowara nkowa nke nkwenye ndi a n'ime ihe omuma nke ochicho obi, nke mmekorita, na mmekorita nke ya na Chineke. Nke a pụtara na ibute ụzọ na nchebara echiche nyere ihe dị iche iche nke nkwenkwe ndị a na-agbanwe na ọnọdụ-kapịrị ọnụ. Akụkụ nke ọnọdụ a bụ nkwenye na Ndị Kraịst nwere ike mmụọ ọjọọ na-achọ nnapụta. Akụkụ ọzọ bụ nkwenye na nkwenye na ofufe siri ike, nke mmetụta uche na ofufe nwere ike ime ka Chineke banye n'ihu ndị kwere ekwe (Houdmann 2002: 1-2). Nkwenkwe na-enweghị njikọ bụ na ụmụ nwanyị kwesịrị inwe ozi zuru oke na nha anya (Houdmann 2002: 2).
E nwere arụmụka ma ekwesịrị ịtụle usoro mmiri ozuzo ikpeazụ a dị ka nke mbụ, nke afọ gara aga ma ọ bụ nke amillenial. Otutu ndi kwenyere na ozuzu oke ikpeazu anabatala onodu ogwugwu oge nke aga emebi emebi n'okpukpe ma chochi ya site na ndi '' ndi mmeri '' ndi nwere ikike nke kari, si otua dozie uwa maka nloghachi nke Jisos Kraist na mbido nke Alaeze Chineke. Ọrụ na oge nke Mkpagbu na owuwe adịghị ka edobela. A na-ahụta okwu ndị a dị ka ihe dị mkpa site na otu ìgwè dị iche iche, ọkachasị ndị mgbagha usoro mgbasa ozi (Warnock 1951: 83).
Enwekwara nkwenye, ketara n'aka William Branham ma gbasaa site na ndị nkuzi mmiri ozuzo ikpeazụ, ọkachasị George Warnock na nke ya akwụkwọ Ememme Ụlọikwuu, na ụfọdụ ndị ji obi ha niile na-asọpụrụ Chineke ga-abụ “Manmụ Chineke Nke Egosiputara”. Ndị ruru ogo a ga-enwe ike yiri nke Chukwu nke gunyere ịsụ asụsụ ọbụla na “ịkpọsa” site n’otu ebe ruo ebe, ihiwe ndị agha ga - emeri nsogbu niile iji kpọbata mmadụ niile n’ọgbakọ otu ala ga - ahazi na njikere maka ọchịchị nke Onyenwe anyi. Amụma a bụ ihe ndabere maka echiche Joel's Army (ma ọ bụ Ndị Na-emeri) (Warnock 1951: 83; Sanchez 2008: 5).
Ndị na-agbachitere nkuzi nke Latter Rain na-ahụ ha dị ka "ihe dị mkpa n'ime ogologo oge nke eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ. Ha na-etinye onwe ha na ndị na-eme mgbanwe, ndị Puritans, ndị Wesleyan, na mmalite nke narị afọ nke iri na itoolu. Ozizi ohuru ohuru, ha kwenyere, bu uzo ikpeazu nke ndi Chineke ji arigo elu dika ha 'gabigara izu oke' ”(Holdcroft 1980: 8).
Ọrụ ofufe nke ndị ụka Rain mmiri ozuzo na-eduzi bụ ọrụ mbugharị ma ọ bụ mmemme emere ka ha. Ọtụtụ n'ime ha nwere obi ụtọ, ebe ndị otu bịara na-achọ ahụmịhe nke mmụọ na nke onwe. Enwere ike ịkọwa ọrụ ahụ, na-eji oge dị ogologo, dị ka mmekọrịta, ebe ọ bụ na ndị na-efe ofufe na-ekere òkè dị ukwuu na ọrụ ahụ (Holdcroft 1980: 10).
Ebe ọ bụ na nkuzi mmiri ozuzo ikpeazụ kwenyere na otuto na ofufe siri ike ga-ewebata Chineke n'ime ndị na-efe ya (oge ụfọdụ a kọwara dịka mweghachi nke Tablọikwuu nke David), mmalite nke ọrụ ndị a na-abụkarị egwu, gụnyere ịbụ abụ n'asụsụ dị iche iche, ịgba egwu na ifegharị. aka aka, na mkpu otuto nke ọ bụla (Liichow 1997: 3; Houdmann 2002: 2).
Ozugbo enwere ike ikuku, enwere ike ikwu okwu banyere oge ikpeazu ma obu okwu amuma, nke ga-esochi oge ogwugwo, ichupu ndi mo ojo, igba ama, na ngozi nke mo. Nke a ga-agunye ndị mmadụ “dara na mmụọ,” ikwu okwu na ịbụ abụ n'asụsụ dị iche iche, ịkọwa asụsụ dị iche iche, na ịkwa ákwá. Ọ bụ onye ndu ahụ na-ekpe ekpere ma “na-ebikwasị aka” aka ma gwọọ ya. Na mbido, ọgbakọ nke Mmiri ozuzo ikpeazụ mepụtara omume nke “ịkpọku” ndị mmadụ aha, na-agọzi ha site na-ibikwasị aka, ma na-enye ha amụma (Holdcroft 1980: 4-5).
Oge ọrụ dị na-agbanwe agbanwe, ọzọ na-agbaso omume nwughari. Ọ bụrụ na akaebe na nchọgharị gara n'ihu, otu a ka ọrụ ahụ dị n'ọtụtụ oge. Ọrụ dị ogologo ma na-eme ọtụtụ ugboro n'izu (na-ahụkarị ụtụtụ na mgbede na mgbede Wednesday, ma a na-ahazi oge ndị ọzọ).
Na mbu ndu nke Mmiri ozuzo Ikpeazu nwere nani ndi ato: George Hawtin, Percy Hunt, na Herrick Holt. Ka oge na-aga, ka mmegharị ahụ na-abawanye, otu a ka ndị otu ndu si wee gafee n'ọchịchị ndị otu Sharon (Holdcroft 1980: 1-4).
O nweghi ndekọ ọ bụla banyere onye n'ime ndị otu mbụ nke Sharon, ewezuga Hawtin, so na ndị gara Vancouver maka nzukọ William Branham, belụsọ na enwere "ọtụtụ" ndị mmadụ. N'iburu oge, echiche ziri ezi bụ na ha atọ metụtara (Riss 1987: 56-57).
Mana ozugbo mmaliteghachi malitere na ụlọ akwụkwọ, ndị ọzọ batara ngwa ngwa. Site na mmalite nke ụlọ akwụkwọ Bible,
atọ ndị guzobere n'oge na-adịghị anya bụ nwanne nwanne George Hawtin na ọgọ ya nwoke, Ernest Hawtin na Milford Kilpatric. Dị ka
revival nwetara ike, George Warnock sonyekwara ha. Warnock abụrụla odeakwụkwọ onwe ya na WJ Ern
Baxter, onye sonyeere ndi minista Branham. Baxter n’onwe ya mechara sonye n’otu otu oge. Warnock dere akwụkwọ a na-akpọ Ememme ụlọikwuu, nke emere ka ọ bụrụ nnukwu akwụkwọ nke otu a, wee gbasaa n'echiche Branham banyere "Manmụ Chineke Nke Egosiputara" (Riss 1987: 53-62).
N'ihe gbasara usoro iwu nke ụka, òtù ahụ guzobere ọnọdụ nke na-akwado nkwado obodo ụka na-emegide onwe ya ma na-emegide ụdị okpukpe ọ bụla. Otu onye hụrụ ihe mere kwuru na “esemokwu na ịkpọasị bidoro ná mmekọrịta nke ha na New Order n'ihi mmeso ịta ụta ha ji iwe katọọ chọọchị dị iche iche na ụkpụrụ nke ụka.” Otu okwu ndị isi a na-akọkarị nke a na-ekwu bụ na “ọ dịghị ụka ọ bụla na-eme ya ma ọ bụ nwee ikike iji aka ya ekpe okpukpe ọzọ, ndị pastọ ya na ndị òtù ya.” N'agbanyeghị nkwupụta a na ọnọdụ a, ndị isi nke otu ahụ mere n'ezie njikwa njikwa, ma n'ime ma na-enweghị otu (Holdcroft 1980: 6-7; Apologetics Index nd: 2).
Nkwenye na a na-eweghachi ndịozi na ndị amụma na chọọchị na oge a mere ka a mata ndị isi na-agagharị agagharị na ọnọdụ ndị a, na-enye ha ohere ịgbagha na amụma amụma ha sitere n'aka Chineke kpọmkwem, ya mere, amụma ndị a karịrị ajụjụ ma ọ bụ ịma aka. Njikwa n'ime otu a kwuru na ọ gbasiri ike, ma ọ dịkarịa ala otu onye so na mbụ kọwara dị ka "onye ọchịchị aka ike" (Holdcroft 1980: 5-7).
Otu Sharon guzobekwara otu “Presbyter” na-ejegharị ejegharị nke gụnyere ndị ozi na ndị amụma ndị a, bụ ndị gara leta ụka na ụlọ ọrụ Latter Rain, na-achịkwa ha site na amụma ndị e lere anya na ha dị mkpa karịa ikike ime mkpebi ndị ọzọ. A kọwawo otu Sharon dịka ịjụ nkuzi ọ bụla na-esiteghị n'aka ndị ndu ya (Holdcroft 1980: 6-7).
Mmegharị ahụ nke mechara bụrụ aha ya bụ The New Order of The Latter Rain mụrụ n’arụmụka. Otu onye edemede ekwuwo hoo haa na ọ bụ “nkwekọrịta nke ọgbakọ tupu ya ebute ihe ime mmụọ.” Otu onye edemede ahụ, L. Thomas Holdcroft, na-akọwa schism dị ka "ịnụ ọkụ n'obi a na-achịkwaghị achịkwa (nke onye nchoputa na ndị isi nke Bethellọ Akwụkwọ Bible) mere megide nchebara echiche dị mkpa na njide nke ndị isi ụka dị iche iche" (Kpọmkwem na Saskatchewan District nke Pentikọstal Assembly of Canada) Njide n'aka 1980: 2).
"Zenụ ọkụ n'obi a na-achịkwaghị achịkwa" gara n'ihu mgbe ndị isi egwu kwagara North Battlefield na, ka oge na-aga, nyere mmanụ maka ọtụtụ esemokwu ndị ọzọ. Nkwenkwe nkwenkwe okpukpe na-adịghị ahụkebe nke ìgwè ahụ nyere ọkụ. Ihe ịga nke ọma ya n'ịmepụta ọtụtụ ndị òtù site na chọọchị ndị ọzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkewa nke ụka Pentikọstal, mere ka ọkụ ahụ dị ọkụ (Holdcroft 1980: 3-4).
Esemokwu izizi sitere na nkwupụta siri ike nke ndị guzobere gbasara ndị isi ụka na ụka dị iche iche kwuru, na mgbe ụfọdụ edepụtara ya. Mgbe e mesịrị esemokwu nke nkà mmụta okpukpe dabara n'ụzọ abụọ, nke a na-amata nke ọma site na isi iyi nke nkatọ, ọ bụ ezie na enwere nnukwu ndozi (Holdcroft 1980: 6).
Nke mbụ n’ime ha malitere nnọọ n’oge na-adịghị anya wee bịa n’ụzọ dị ukwuu site n’isi mmalite Pentikọstal. Ndị Pentikọst jụrụ iji amụma nke onwe, nnyefe nke onyinye ime mmụọ (dịka ọgwụgwọ, amụma na asụsụ dị iche iche) site na ibikwasị aka n’isi site n’aka otu onye kwere ekwe na onye ọzọ. Ndi ahu juru ihe ndi Pentikost chere dika nghota nke akwukwo nso, nkwenye na amuma umu Chukwu, na mweghachi nke onodu nke ndi ozi na ndi amuma, na akpo ndia nile imegide ozizi ndi Pentikostal. Ndepụta nke mmegide a bụ ihe ndabere maka ịjụ 1949 nke ngagharị nke Mmiri mmiri ozuzo site na Mgbakọ nke Chineke na ọtụtụ ndị otu Pentikọstal ndị ọzọ (Riss 1987: 119).
Ka oge na-aga, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị isi okpukpe dị iche iche bipụtara, nke mbụ na akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ na mgbe e mesịrị na weebụsaịtị, ịjụ nkwenkwe nkuzi eschatological nke Mmiri ozuzo, nkuzi nke ụmụ Manifest, na nkuzi mweghachi nke gosipụtara ndịozi na ndị amụma dị ndụ. , n'ihe ha lere anya n'amụma “a na-anabatabeghị '' ha, na n'ihe ha tụlekwara iji Akwụkwọ Nsọ eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Otu n'ime nkwupụta dị nkenke nke ọnọdụ a sitere n'aka Holdcroft: "Ọ dịghị otu nwere ike ịnọgide na-ada ụda n'okwukwe ma na-eme omume ma ọ bụrụ na ọ na-enye ikike maka ahụmịhe maka onwe ha, karịa na ntọala nke ụkpụrụ nke Okwu Chineke" (Holdcroft 1980: 10).
Onye ọzọ, nkatọ buru ibu na-esite na isi mmalite nke obodo abụọ a ma na-emetụta Pentikọst n'ozuzu ya na ikekwe ndị otu n'ime ọdịnala Nsọ, dịkwa ka ebumnuche nke nkuzi Latter Rain. Nke ahụ bụ esemokwu na mmetụta uche, ike karịrị nke mmadụ, asụsụ, ọgwụgwọ, na nkuzi ndị ọzọ gbasara onyinye ime mmụọ, bụ ọhụụ ugbu a-Montanism, mmalite nke narị afọ nke atọ nke Ndị Kraịst. Ihe a bụ nsogbu karịrị oke nke edemede dị ugbu a. ("A na-amụ banyere ụka," nd: 1-4).
Nkatọ nke oge a abụghị nke usoro mmiri ozuzo ikpeazụ, kama ọ bụ gburugburu ngosipụta dị ugbu a
nke nkuzi na omume ndị bidoro, ma ọ bụ sitere na nkuzi nkuzi Latter Rain. Offọdụ n'ime ndị a gụnyere Army of Joel na otu ndị yiri ya dabere na nkuzi ụmụ nke Chukwu (nke sitere na William Branham), ndị na-azụ atụrụ, mweghachi na ịchịisi (Sanchez 2008: 1-6).
Apologetics Index, Apologetics Research Resources na Okpukpe na òtù. nd Nweta site na www.apologeticsindex.org/108.html na 29 November 2013.
Njide, L.Thomas. nd Iku Dị iche, Usoro Ọhụrụ nke Mmiri ozuzo Ikpeazụ . Nweta site na www.spiritwatch.org/firelatter2.htm na 5 August 2013 .
Houdmann, S. Michael. nd Nwee ajụjụ . Nweta site na www.gotquestions.org/latter-rain-movement.html 5 August 2013.
Liichow, Rev. Robert S. nd Mweghachi “The Rain Rain Movement . "Nabatara na www.newdiscernment.org/restorat.htm na 5 August 2013.
Riss, Richard M . 1987. Mmiri ozuzo ikpeazụ; Mmiri ozuzo ikpeazụ nke 1948 na Mid-Twentieth Century Evanngelical edemede . Mmanụ aeyụ Visual Productions, Ltd., Mississiauga, Ontario, Canada.
Sanchez, Casey. 2008. Ndị agha Todd Bentley nke Militant Joel na-enweta ndị na-eso ụzọ na Florida .
Akwụkwọ akụkọ ọgụgụ isi nke Southern Poverty Law Center , Fall. Nweta site na www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2008/fall/arming maka agha Amagedọn na 26 November 2013.
Ọmụmụ nke Okpukpe, Montanism. nd. Nweta site na www.astudyofdenominations.com/history/montanism/ na 26 November 2013.
Warnock, George H. 1951. Ememme ụlọikwuu. Bill Britton: Springfield, MO.